သတိ ! သကြားများပါသည် | Home
Home› Life› Health› သတိ ! သကြားများပါသည်› သတိ ! သကြားများပါသည်
သတိ ! သကြားများပါသည်
လူသားတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဂလူးကို့စ်လို့ခေါ်တဲ့ သကြားဓာတ်လိုအပ်ပါတယ်။ စားသုံးလိုက်တဲ့ အစားအသောက်တွေ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ပြိုကွဲပြီး စွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲတဲ့ ဖြစ်စဉ်အ တွင်းမှာ ဂလူးကို့စ်လည်း ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ အစားအသောက် များမှာ သဘာဝအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ ဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ Sucrose လို့ ခေါ်တဲ့ သကြားဓာတ် ပါဝင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Sucrose ဟာ စားသုံးပြီးနောက် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ Glucose နဲ့ Fructose ဆိုတဲ့ သကြားဓာတ်များအဖြစ် ပြိုကွဲသွားပါတယ်။ Glucose ကိုတော့ စွမ်းအင်အဖြစ် အသုံးပြုပြီး Fructose ကတော့ အဆီအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ သကြားဓာတ်များများ ပါဝင်တဲ့ အစား အသောက်တွေ စားသုံးတဲ့အခါမှာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ မလိုအပ်တဲ့ Fructose တွေ စုပုံလာစေပြီး အဆီတက်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကဘာကြောင့် သကြားစားသုံးမှုကိုလျော့ချသင့်သလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့ အဖြေဖြစ်ပါတယ်။ သကြားစားသုံးမှု လျော့ချပါဆိုတဲ့အခါမှာ ကော်ဖီခွက်ဘေးမှာချထားတဲ့ သကြားဘူးထဲကသကြားကိုပဲ ဆိုလိုနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ အစားအသောက်များထဲမှာ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ပါဝင်နေတဲ့ သကြားပမာဏကိုပါ လျော့ချဖို့ လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ သင်မသိဘဲ သကြားဓာတ်များများ ပါဝင်နေတဲ့ အစားအသောက်တွေက ဘာတွေများပါလဲ။
သစ်သီးဖျော်ရည်များ။ သာမန်အရဆိုရင်တော့ အချိုရည်တွေထက် ကျန်းမာရေးအတွက် သင့်တော်တဲ့ အစားထိုးရွေးချယ်စရာလို့တောင် ယူဆနိုင်ပါတယ်။ သစ်သီးတွေမှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင်တွေနဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေကိုလည်း ရရှိစေမှာ ဖြစ်
ပြီး ပူအိုက်တဲ့နေ့တွေမှာ ကုန်ခမ်းသွားတဲ့ ရေဓာတ်နဲ့ စွမ်းအင်တွေကိုပါ ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးမှာဖြစ်တာကြောင့် ဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့်သစ်သီးဖျော်ရည်တွေဟာ သင့်အတွက်သောက်သုံးဖို့ ဘေးကင်းပုံရပါတယ်။ ဒါဆိုဘာကြောင့်သစ်သီးဖျော်ရေတွေက ရှောင်သင့်တဲ့ အစားအသောက်များ စာရင်းမှာ ပါဝင်လာရတာပါလဲ။ သစ်သီးဖျော်ရည်စစ်စစ်ကို အိမ်မှာပြုလုပ်သည် ဖြစ်စေ၊ အသင့်သောက်သုံးနိုင်တဲ့ အမျိုးအစားဖြစ်စေ သကြားများ ပါဝင်ပါတယ်။ သကြားပမာဏများများ စားသုံးခြင်းက ဆားများများ စားသုံးခြင်းကဲ့သို့ပဲ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်မှုဖြစ်စေပါတယ်။ အချို့သောအသီးတွေဟာ သဘာဝအရ သကြားဓာတ် ပါဝင်မှုမြင့်မားပြီး အဲဒါကိုမှပြင်ပ သကြားထပ်ထည့်လိုက်ပြီး သင်ကဒါကိုတစ်ဖန်ခွက်၊ဒါမှမ
ဟုတ် တစ်ပုလင်းခန့်သောက်သုံးလိုက်ပြီဆိုရင် တစ်ရက်တာအတွက် သစ်သီးဖျော်ရည်တစ်ခွက်မှတစ်ဆင့် သ့င်ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်ရောက်သွားမယ့် သကြားပမာဏကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ အကယ်၍ သင်က သကြားထပ်ထည့်ထားတဲ့ သစ်သီးဖျော်
ရည်တစ်ခွက်ကို နေ့စဉ်သောက်သုံးလေ့ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်နေရင်သင့်ရဲ့ သကြားစားသုံးမှုကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြည့်ရမယ့်အချိန် ရောက်ပါပြီ။ သကြားဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းပါးတဲ့ သံပုရာသီး၊ စတော်ဘယ်ရီ၊ သင်္ဘောသီးစတဲ့ အသီးတွေနဲ့ အစားထိုးနိုင်ပါတယ်။
သစ်သီးသစ်နှံတွေဟာ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် စားသုံးတဲ့အခါ အကောင်းဆုံးပါ။ အကယ်၍ အဆိုပါ သစ်သီးသစ်နှံတွေကိုပဲ ပါဝင်တဲ့ ရေဓာတ်ကိုဖယ်ထုတ်ပြီး ဓာတုနည်းနဲ့ အခြောက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ သစ်သီးခြောက်တွေရဲ့ အာဟာရတန်ဖိုးက မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ ထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်အရ သကြားတွေကိုသာ လှိုင်လှိုင် အသုံးပြုထားတဲ့ သစ်သီးခြောက်တွေမှာ နာမည်အတိုင်း ရေဓာတ်ပါဝင်မှုလည်း မရှိတော့ဘဲ အချို့သော အာဟာရဓာတ်များလည်း ဆုံးရှုံးသွားပြီဖြစ်တာကြောင့် သဘာဝလတ်ဆတ်တဲ့ သစ်သီးလိုလည်း သင့်ကို အကျိုးမပြုနိုင်တော့ပါဘူး။ ဥပမာအနေနဲ့ Apricot လို့ခေါ်တဲ့ တရုတ်ဆီးသီး ၃ဝ ဂရမ်မှာ ၁၇ ကယ်လိုရီသာ ပါရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရုတ် ဆီးသီးခြောက်ခွက် တစ်ဝက်စာမှာတော့ ၁၇ဝ ကယ်လိုရီလောက်ပါရှိပြီး သကြားတွေလည်း အပိုဆုအနေနဲ့ ပါဝင်နေပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် သစ်သီးတွေ ပုံမှန်မစားနိုင်လို့ သစ်သီးခြောက်လေးတွေ စားပေးရမယ်လို့ သင်စိတ်ကူးနေရင် ဒီစိတ်ကူးကို ပြန်လည်စဉ်းစားပါဦးလို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။
ဈေးဝယ်စင်တာတွေရဲ့ တန်းတွေမှာ လှပစွာ တန်းစီထားတဲ့ အရောင်အသွေး အစုံအလင်နဲ့ အရသာမျိုးစုံရှိတဲ့ အချိုရည်ဘူးတွေဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးမပြုဘူးဆိုတာ လူတိုင်းနီးပါးသိထားကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်မသိလိုက်ဘဲ ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ နို့ဘူးတွေ၊ ရေနဲ့ပြန်ရောရတဲ့ အချိုရည်အဆီတွေ၊ ကယ်လိုရီသုညလို့ စာတန်းထိုးထားတဲ့ အဖျော်ရည်မျိုးစုံမှာလည်း သင်ထင်မှတ်မထားတဲ့ သကြားပမာဏ ပါဝင်လို့နေပါတယ်။ နောက်ထပ်သတိထားရမယ့် အရာကတော့ စွမ်း
အားဖြည့် အချိုရည်များဖြစ်ပါတယ်။ စွမ်းအားဖြည့်အချိုရည် တစ်ဘူးသောက်တော့မယ်ဆိုတိုင်း သင့်ကိုယ်သင်ပြန်မေးရမယ့် အရာက ဒီအချိုရည်ကရတဲ့ စွမ်းအင်ကို ငါတကယ်သုံးပစ်မှာလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကယ်လိုရီ ၂ဝဝ လောက်ပါဝင်တဲ့ စွမ်းအားဖြည့် အချိုရည်တစ်ဘူးကရမယ့် စွမ်းအင်ကိုသင်အသုံးမပြုလိုက်ဘူးဆိုရင် အဆိုပါ စွမ်းအင်က သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အဆီအဖြစ်ပုံစံပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။
ကွတ်ကီးတွေဟာ မလိုင်မုန့်တွေနဲ့ အခြားသောမုန့်အချိုတွေထက်စာရင် သင့်အတွက်တော့ ဘေးကင်းပုံရပါလိမ့်မယ်။ သိပ်မချိုဘူး၊ ဆိမ့်ဆိမ့်လေးပဲဆိုပြီး သင်ဝယ်လာပြီး တကြွပ်ကြွပ်စားမိတဲ့ ကွတ်ကီးတွေမှာလည်း အမှန်တော့ အခြား
မုန့်များနည်းတူ သကြားပါဝင်ပါတယ်။ ထောပတ်တွေနဲ့ အခြားသော ပါဝင်ပစ္စည်းများကနေလည်း ကယ်လိုရီ၊ ဆားနဲ့ အဆီဓာတ်တွေကို အပိုအဖြစ် ပါလာဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကွတ်ကီးတွေကလည်းသင်သတိမထားမိဘဲ သကြားပါဝင်တဲ့ အစားအစာများဖြစ်တာကြောင့် ရှောင်သင့်တဲ့ အ စားအသောက်စာရင်းမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
ကိတ်တွေနဲ့ ပူတင်းတွေမှာ သကြားပါဝင်ပြီး ကယ်လိုရီများတဲ့ အစားအစာတွေဖြစ်တာကို သင်လည်း သတိထားမိမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်သတိမပြုမိမှာက ပါဝင်တဲ့ သကြား ပမာဏဖြစ်ပါတယ်။ မှန်ပါတယ်၊ ကိတ်တွေနဲ့ ပူတင်းတွေမှာ သကြားပမာဏအလွန်များများကို ပါဝင်ပါတယ်။ အချိုအပေါ့ဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားတဲ့ ချောကလက်ကိတ် တစ်တုံးမှာ ၂၃၅ ကယ်လိုရီပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကသကြား ၂ဝ ဂရမ်ကနေ ၃ဝ ဂရမ်အတွင်း ပါဝင်တယ်လို့ ဆိုလိုတာဖြစ်ပါ တယ်။ ပူတင်းတစ်ခွက်က ကယ်လိုရီ ၁ဝဝ အနည်းဆုံးရှိပြီးသကြား ၁၂ ဂရမ်လောက်ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီအစားအစာတွေမှာ ပါဝင်တဲ့သကြား ပမာဏကို သင်ကိုယ်တိုင် အံ့အားသင့်သွားနိုင်ပါတယ်။
အေးခဲထားတဲ့ အချိုပွဲဆိုတဲ့အခါမှာ ပေးနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးဥပမာကတော့ ဒိန်ချဉ်ပါပဲ။ ဒိန်ချဉ်ကို ဒိန်ချဉ်ချည်းသက်သက် စားနိုင်တဲ့သူအတော်ရှားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အချဉ်အရသာကို ထိန်းဖို့ သကြားသို့မဟုတ် အခြားအချိုရည်တွေနဲ့ တွဲဖက်
စားသုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီမှာ သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် ရှောင်သင့်တဲ့၊ တတ်နိုင်သလောက် နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် စားသင့်တဲ့ သကြားကပါလာပါပြီ။ ဒိန်ချဉ်တစ်ခွက်ရဲ့ အရသာကိုထိန်းဖို့ သကြား ၂၅ % နှုန်းလောက် ပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ဒိန်ချဉ်တစ်ခွက်မှာ ပါဝင်မယ့် သကြားပမာဏကို သင်ခန့်မှန်းနိုင်ပါပြီ။ ဒိန်ချဉ်က ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်သင့်တော်ကောင်းမွန်တဲ့ အစားအစာတစ်မျိုး ဖြစ်တာကြောင့် မကြာမကြာစားသုံးပေးသင့်တဲ့ အစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး သကြားနည်းနည်းနဲ့ စားနိုင်ဖို့တော့ ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Ref ; 10 Foods High InSuger (To Avoid)